Iprofayile yeNkampani-SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Umfanekiso wefektri & nevidiyo
Inqaba yentsimbi ye-angle
Inqaba ityhubhu enye
inqaba yentsimbi ye-angular
inqaba yensimbi ye-tubular
inqaba ephezulu yophahla
Inkqubo yeBeacket yenyikima
isakhelo esiphakanyisiweyo somhlaba
Iphepha leSilicon lentsimbi
Isakhiwo soMbane woMbane
Ukuzibophelela kunye neProjekthi
Impilo, ukhuseleko kunye nokusingqongileyo
SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd. yasekwa ngo-2008.
I-XY Tower yenye yezona zinto zinkulu zabavelisi bendawo yothumelo entshona China.Inkampani ibonelela ngezakhiwo ezahlukeneyo zentsimbi, ezikhethekileyo kwi-500kV kunye neenqaba zombane ezingaphantsi, ubume besikhululo esincinci, inqaba yonxibelelwano, ukwakhiwa kombane kaloliwe, njl.
XY Tower igubungela indawo 33,000 square metres kwaye ngumnini 10 umgca wemveliso oluzenzekelayo kunye umthamo imveliso yonyaka 30,000 iitoni.Ulawulo lwe-XY Tower lunamava amaninzi kushishino lombane.Ingeniso yenkampani ingaphezulu kwe-20 yezigidi zeedola, ngelixa iimveliso zenkampani zisetyenziswe ngokubanzi yi-China.
I-XY Tower ngumboneleli ofanelekileyo weGridi yeSizwe, i-Southern China Power Grid kunye neenkampani ezininzi zombane ezidumileyo.
XY Tower ibonelela ngenkonzo kumakhulu abathengi abawela ilizwe.Ngoku i-XY Tower iphuhlisa imakethi yaphesheya ngokukhawuleza.I-XY Tower ijonge ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye nenkonzo yobungcali kubathengi kwihlabathi liphela.Amaqabane ethu e-XY Tower sele egubungele uMzantsi Merika, iAfrika, iSoutheast Asia njl.
I-XY Tower yenza isibophelelo sokuba sihlala sibonelela ngenkonzo yobungcali kubo bonke abathengi bethu.Sijonge phambili intsebenziswano kunye nawe.
Sikholelwa ukuba imveliso kunye nenkonzo esiyinikezelayo inokwenza abathengi bethu bakwazi ukufikelela kunikezelo lombane oluthembekileyo.
Isakhiwo esitsha seofisi kunye nocweyo lugqitywe ngempumelelo, kwaye umsitho wokufuduswa kwabantu kulindeleke ukuba ubanjwe ekuqaleni kuka-2021.
Iplanti entsha kunye nolwakhiwo lweofisi luqala ukwakhiwa, emva koko, amandla okuvelisa aphezulu aya kudlula iitoni ezingama-30,000 ngonyaka.
Umatshini omtsha wediphu oshushu wakhiwa
Indawo yeHot dip galvanized plant ingaphezulu kwe 12,000 m2
Ufumene ishishini elibalaseleyo lesixeko.
Ingeniso yonyaka okokuqala idlula i-100,000,000 RMB
Irejista eyinkunzi ebhalisiweyo ifikelela kwi-50,000,000RMB, Siphumelele isivumelwano sokuqala esivela kwimarike yaphesheya (eSudan).
Imveliso yonyaka yafikelela kwi-10,000 yeetoni zenqaba
Imveliso entsha esekwe yayakhiwe Indawo entsha esekwe ingaphezulu kwe-30,000 m2 kwaye inkulu kakhulu kunangaphambili
Sichuan XiangYue tower Co.,Ltd.kwafunyanwa kugxininiso kushishino lwentsimbi yenqaba, iworkshop eyakhiweyo kwaye yaqalisa ukuvelisa itower yentambo yombane
Inkampani yoRhwebo iphumelele isivumelwano sokuqala sothungelwano lwentambo
Inkampani yeSichuan XiangYue yokurhweba ngezixhobo zombane yafunyanwa Ikakhulu ishishini lalirhweba isiguquli, iintambo kunye neentambo, izixhobo zombane njl.njl.
Intloko Factory:Hayi.528, iCandelo laseNtshona, i-Liutai Avenue, i-Chengdu, e-China
Umzi-mveliso we-HDG:No. 366, Tongxin Avenue, Chengdu, China
© Copyright 20192022: Onke Amalungelo Agciniwe.